သေစာ….ရှင်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သေစာ….ရှင်စာ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 8, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 33 comments
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မဒမ်တို့ ရွာလေးမှာပါဘဲ…။
သူတို့ ရွာသားတွေထဲမှာ လည်လည်ဝယ်ဝယ်လူတွေရှိသလို ရိုးရိုးကြီးတွေလည်း ရှိပါတယ်…။
ကျနော်က အနူတောမှာ လူချောမဟုတ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကိုယ်နိုင်သလောက်လေးတော့ မသိနားမလည်မှုတွေ…အစွဲအလမ်းတွေ၊ အယူသီးတာလေးတွေကိုတော့ ကျွဲကူးရေပါ ဆိုသလို သူတို့ အလိုလေးကိုဖြည့်ပြီးကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် အလိမ္မာလေးနဲ့ နားချယူရပါတယ်…။
ကျနော်က ဆရာလို့ လည်းမကြွေးကြော်ပါဘူး…ဘာဂိုဏ်းမှလဲ မထားဘူး…။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘက်တွေမှာက လည်း…ခေါင်းဖြူစွယ်ကျိုးကြီးတွေက ပုတီးလေးကိုင် ၊ ယောဂီလေးဝတ်ပြီး..သာသနာပြုတယ်သာပါးစပ်ကပြောနေတာ…လူတွေကို မသိစိတ်စွဲလန်းမှုတွေထဲ တွန်းပို့ နေကြတာ မြင်ရကြားရ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး…။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရော ဘာလို့ ဒါတွေလုပ်နေလဲ ဆိုရင်တော့ သူတစ်ထူးရဲ့ ကျေးဇူး…မမေ့ကောင်းလို့ ပါ…။
ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်မျက်စိမှတ်ယုံတာမဟုတ်ခဲ့ ဘူး..မိုက်မှားတဲ့ အရွယ်..ရေပေါ်ဆီ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေချိန်မှာ သေဘေးက လက်မတင်လေး သတိပေးပြီး ပထမအဆင့် ဘာသာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့ တဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ…။
ကျနော်က ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့“ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို ကူးဘို့ ဖောင်ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ဖက်ကမ်းရောက်တဲ့ အခါ၊ မိမိစီးလာတဲ့ဖောင်ကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်သွားစရာ မလိုဘူး” ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒကို လိုက်နာနေသူပါ…။
အတိုင်းအတာထက်မကျော်ကြေးပေါ့…။ ကိုယ်ကလည်း လောကီဘောင်ထဲမှာ နေတုန်းဆိုတော့ လောကီကိစ္စတွေကနွှယ်လာတာပါဘဲ ၊ ယုံဘို့ ခက်ပေမယ့်..။ ယုံလွန်းလို့ မှားနေတဲ့ အစွဲရှိသူတွေကို တည့်ပေးချင်တာပါ…။ ပြောခဲ့ သလိုပေါ့ ကျွဲကူးရေပါလေ…။
နည်းနည်းတောင်စကားလမ်းကြောင်းလွဲနေပြီ….။ ပြောချင်တာက တစ်ချို့ တွေရဲ့ ရိုးသားမှုလေးတွေ…။
ရိုးလွန်းတော့ အ တယ်တဲ့ …။
တစ်နေ့ ပေါ့ စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်၊လ္ဘက်ရည်နဲ့ ဆေးလိပ်လေးဖွာလိုက်နှပ်နေတုန်း…ရေးကြီးသုတ်ပြာနဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်..။
ဒေါ်မြစိန်တဲ့ ၊ရွာမြောက်ပိုင်းက…။ဖြစ်တာက သူ့ အိမ်ဘေးက ကလေးရွာအစွန်က သစ်ပင်ကြီးမှာ အပေါ့အပါးသွားပြီး အိမ်ရောက်တော့ ငိုငိုရယ်ရယ်နဲ့ အသားစိမ်းစားချင်တယ်ဘဲ…တောင်းဆိုပြီးပွဲကြမ်းနေလို့ တဲ့…။ သူ့ မိဘတွေကလည်း ဘာမှမလုပ်တတ်မကိုင်တတ်လို့သူက ကူညီိပေးတာဆိုဘဲ..။
သူပြောလာတာနဲ့ ကိုယ်က စဉ်းစားရပြီ…
ဆင်းရဲကြတယ်..တစ်ချို့ ငါးလေးဘာလေးရရင်ရွာထဲလှည့်ရောင်း…ဈေးရောင်းရမှ ဆန်ဝယ်ချက်ပြီး ထမင်းစားကြသူလဲရှိတယ်…တောင်ပေါ်က သစ်ရွက် သစ်ဖုလေးတွေ တက်ချိုးပြီး…“ အကြီးရေ…ဟောဒီက မျှစ်ပြုတ်ယူကြဦးမလား..” ဆိုပြီးရွာပတ်ရောင်းရတာ…
အဲဒါကုန်မှ ဆန်ဝယ်ရမှာလေ…။ တစ်ချို့ ဆိုဆန်ကွဲဘဲ ကျိုစားရတာ..။
“ ကလေးက…အသားငါး မစားရတာကြာလို့ ရိုးရိုးသားသားစားချင်တယ်ပြောတာများလားဗျာ”
“ မဟုတ်ဘူး….ငါ့တူရဲ့ …သူ့ ဟာက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး”
“ သံကောင် ထိုးလို့ များ…ချဉ်ခြင်းတက်တာများလား”
“ အခုဟာက လူပျိုပေါက်လေး…ဆရာ.သန်ထိုးတာ မဟုတ်ဘူး…၊ စကားပြောသံကလဲ သူ့ အသံလဲ မဟုတ်ဘူး…”
“ ဘယ်သူ့ အသံလဲ…ဟင်္သာတထွန်းရင်လား….လေးဖြူလား…”
“ အို…ဆရာကလဲ …ကြံကြံဖန်ဖန်…ဘယ်ကလာ ဟင်္သာတ ထွန်းရင်ရမှာလဲ….အခုအသံကြီးက ကြောက်စရာကြီး…”
“ သိပါတယ်…အဒေါ်ရယ်…အဒေါ်စိတ်အပူများနေလို့ ရီစရာအဖြစ်ပြောတာပါ…ခဏစောင့်”
ဘုရားဦးချပြီး ပေးသင့်တာ၊လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ပေးပြီး…
“ ကဲ…ရပြီ…အဒေါ် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ အဲဒီကလေးကို ဒီဘုရားသောက်တော်ရေကိုတိုက်ပါ…ပြီးရင်တော့ ဒီစာ၇ွက်ကိုယူသွားပါ..
ဒီစာနဲ့ ဒီပုံကို အဲဒီသစ်ပင်မှာ သွားထားလိုက်ပါ…အမွှေးတိုင်လေးထွန်းပေးပြီးမေတ္တာပို့ ပေးပါ…”
“ ဟို…ဘာမှ မကျွေးတော့ဘူးလား…”
“ သားစိမ်းငါးစိမ်းလေး ဘာလေး….”
“ ဘာအသားစိမ်းမှမကျွေးနိုင်ဘူး…မသေခင်စွဲလန်းစိတ်ကြောင့် အခုလို သရဲ တစ္ဆေ ဘ၀ရောက်နေတာကို သားစိမ်းငါးစိမ်းကျွေးတော့ သရဲထက်ကြီးတာဘဲ ဖြစ်တော့မှာ…နောက်ပြီး စားရမှန်းသိလေ…ပိုဆိုးလေ ဖြစ်နေမှာပေါ့..”
“ ကျနော်ပြောမယ်….အဒေါ့်ရဲ့ သားက အရက်မူးပြီး ရမ်းကားနေတယ်ဆိုပါတော့…အဲဒါကို စိတိဆိုးပြေအောင် အရက်ထပ်ဝယ်တိုက်ရင်…
“ ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေး အဒေါ့်မှာ သားယောင်္ကျားလေး…မရှိပါဘူးကွယ်…မွေးထားတာ မိန်းကလေးချည်းဘဲ ၃ယောက်”
“ ဥပမာ ပြောတာ အဒေါ်ရဲ့ …”
“ အော်….အေးကွယ်” ………..။ မဒမ်တို့ ရွာက အဲလိုမျိုး..။
“ဒါဆို…မှတ်ထားနော်…ထမင်းဖြူလေး.ကိုဗန်းလေးတစ်ခုမှာထည့်ပါ…သွားကျွေးဘို့ …ပြီးရင် ကျနော်မှာသလိုသာပြောဟုတ်လား အဒေါ်..”
ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်လဲ ပြောသင့်တဲ့ စကားတွေ ပြောပြပေးပြီး…နောက်ဆုံး အမျှဝေပေးခိုင်းတာပေါ့…။ စကားဆုံးမှ….
“ ဆရာ..ထမင်းသက်သက်ဆို မကောင်းဘူး ထင်တယ်၊ ငါးကြော်လေးတော့ ထည့်ပေးမှ ကောင်းမယ်ထင်တယ်…”
“ ကဲ…အဒေါ်။။ လူနာဝေဒနာ ပျောက်ဘို့ တော့ ကျနော့်တာဝန် …ဟုတ်လား ကျန်တာတော့ အဒေါ်ကျွေးချင်တာသာကျွေးတော့…”
သူ့ ကိုယ်သူ ထမင်းဆိုင်က လပေးချိုင့်(ဂျိုင့်)ဆွဲသမားကို ထမင်းပို့ တယ်ထင်လားမသိ။
“ အဲ…ခုနင်က ဆရာပြောတာလေးတွေ စာနဲ့ ရေးပေးလိုက်ပါလား…အဲလောက်အစီအစဉ်ကျအောင် မပြောတတ်လို့ …။
ဟင်းးးးးးးးး.။ မဒမ်ကိုဘဲ အကူအညီတောင်းပြီး၊ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြော…မဒမ်က လိုက်ရေးပေး…ပေါ့။
ပြီးလဲပြီးရော..ပါလာတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ထုပ်လေး ဘုရားစင်ပေါ်လှုပြီး သုတ်ချေတင် ပြန်သွားလေရဲ့ …။
နောက်ရက် ညနေပိုင်းမှ အဒေါ်ကြီး တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပြီး….အားရ၀မ်းသာနဲ့ ….
“ ကျေးဇူး တင်လိုက်တာ ဆရာရယ်…ဆရာပေးတဲ့ ရေမန်းလေး တိုက်လိုက်တာနဲ့ ကောင်လေးက လူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာ….”
“ အဒေါ် သစ်ပင်ဆီကိုရော သွားလိုက်ရဲ့ လား…”
“ အဲဒါကို ပြောချင်လို့ ဆရာ….သူတို့ ကျေနပ်ပါ့မလားမသိဘူး..”
“ သြော်…အဒေါ်ရယ်…ကျေနပ်သွားလို့လူနာလဲ အကောင်းဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား”
“ အဲဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်…ကျမ အတွက်ပြောတာ…”
“ မနေ့ ညနေက ဆရာ သွားခိုင်းတဲ့ သစ်ပင်ကို ဘယ်သူမှ မလိုက်ရဲဘူးဆရာ….ခေါ်လို့ ကို မရတာ…အဲဒါနဲ့ တစ်ယောက်တည်း မှောင်ထဲမှာသွားပြီး ကျွေးရတာပေါ့…”
“ မဟုတ်ဘူးဆရာ….အဒေါ်က စာမတတ်တော့ ပါးစပ်ကဘဲ ပြောလိုက်တယ်…”
သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့ မှတ်သားလောက်ပါရဲ့ ဗျာ…။
“ ကဲ…သရဲတွေ့စားချင်တယ်ဆိုလို့ လာကျွေးတာ…ဆရာမှာသလို ငါလဲ မပြောတတ်ဘူးငါလဲ စာမတတ်တော့၊ ဒီမှာ ရေးထားတဲ့ “ စာ ” ပါတယ်….
ကိုယ့်ဘာသာဖတ်ပြီး ကြည့်ကျက်စားကြပေတော့” လို့ ပြောပြီး….. ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ တစ်ချိုးတည်း ပြန်ပြေးလာခဲ့တာတဲ့…။
ကျနော်တို့ မိသားစု လဲ ဘယ်နေနိုင်မလဲ ရယ်မိတာပေါ့….။ သူကတော့ မျက်စေ့မျက်နှာကိုပျက်လို့ ..။
“ အဲဒါ…သူတို့ စားလို့ ဖြစ်ရဲ့ လား…”
“ အဒေါ် ပြောပုံဆိုရင်တော့ စာမတတ်တဲ့ သရဲက မစားရဘဲ ငတ်ဘို့ ဘဲရှိတယ်…စာတတ်တဲ့ သရဲက အကုန်စားမှာပေါ့…”
ကျနော်က သူ့ ကို ခင်မင်စိတ်နဲ့ အတည်ပေါက် စ”နေတာ…။
“ အင်…ဒါဆို မစားရတဲ့ သူတွေက အဒေါ့်ကို ငြှိုးနေမှာပေါ့…အဒေါ့်ကိုလဲ ရေမန်းလေး တစ်ခွက်တိုက်ထားပါကွယ်”
ပြီးမှ…ကုလာမတောင်တန်းကြီးကို ခပ်ငိုင်ငိုင်ကြည့်ပြီး…စကားတစ်ခွန်း ပြောလာသေးတယ်…။
“ သြော်…ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင် မငတ်အောင် ၊သေစာ ရှင်စာလေးလောက်တော့ စာဖတ်တတ်အောင် မသေခင် စာသင်ထားဦးမှ”…တဲ့။။
စောစောက ရယ်မိပေမယ့် ကျနော်သူ့ စကားကိုစဉ်းစားပြီးစိတ်မကောင်းဘူး…။
လောကီစာတတ်ဘို့ လိုသလို… လောကုတ္တရာအတွက် အသိလဲ ရှိသင့်ပါတယ်…
အင်း….ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါစေ ကိုယ်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ ဘာသာရေးကို လေးနက်သင့်တယ်
ဘာသာရေးကို မလိုက်စား ၊လိုက်စားပြီး နားမလည်ရင်တော့ သံသရာ တစ်ခုလုံးကန်းနိုင်တယ်ဗျာ….။
ရွှေစေတီတွေ တ၀င်းဝင်းနဲ့ သာသနာ ထွန်းကားပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ….မှာ…
တစ်ကယ့်သာသနာပြုရဟန်းတွေ တိုးပွားပါစေလို့ ဘဲ ကျနော်ဆုတောင်းမိပါတယ်…။
အဒေါ်ကြီး ပြောတဲ့ သေစာ…ရှင်စာ….။
ပန်းချီဆရာ – စောင်းမဖတ်တတ်လို့ ဒဲ့ဘဲ ဖတ်သွားတယ်။
တော်သဗျား။ မပြောတော့ဘူး တော်ရေ့။
စာကိုတောင် ဘယ်ဘာသာစကား က မှ ပိုပြီး ပေါက်မြောက်တယ် ဆိုတာ တွေ ရှိသေး။
ဒီတစ်ခါ စောင်းရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး…
ဘယ်စာက ပေါက်မြောက်တုန်း…မပြောချင်လဲ အဲဒါလေးတော့ ပြောပါဦးးးးး
ဆရာခေါင်က ပယောဂ လည်းကုတတ်သကိုး…ဟဲဟဲ နောက်တာပါ
ဆရာခေါင်ရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်ဗျာ….အဲဒီလိုအယူအစွဲတွေက
အဲဒီလို အမှောင့်၊ ပယောဂ တွေကုပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်ယောင်ယောင်
ကျနော့ညီ တစ်ခါက အရက်ကြောင်ပြီး အိမ်မပြန်၊ လျှောက်သွား၊ ပြောချင်ရာတွေလျှောက်ပြော
အဲဒါကို အိမ်ကအမကြီးတွေက သူ့ရုံးက မနာလိုသူတွေ ပြုစားတာဆိုပြီး ပယောဂဆရာသွားပြပါလေရော..
ကျနော်သိလို့ လိုက်သွားပြီး ညီလေးကိုကြည့်တော့..အရက်တွေများပြီး ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာ
သွေး က အရက်နဲ့ မတည့်လို့ အဲလိုဖြစ်တာပါ..နောက်အရက်ပြတ်သွားတော့ကောင်းသွားပါရော..
(ကျုပ်သွေးကတော့ အရက်နဲ့ တဲ့မှတဲ့…ဒါဘယ်ဘလက်လေးဆို ပိုတဲ့သေး..ဟေးဟေး :-D)
ပယောဂ ကုဆရာရယ်တော့ ဟုတ်ဘူးဗျ…
ဘေးကနေ အချွန်နဲ့ မ ပေးကြတာ..ဟေးဟေးးး ကြုံရတာတွေ နောက်မှ ပြောပြဦးမယ်..
ကျနော့် သဘောကလဲ ကိုမိုက်လိုဘဲ..
မသိနားမလည်သူကို ဦးဆောင်တဲ့သူက ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်း ကိုမသိတော့ သူ တို့ အားကိုးသူတွေခမျာ..
ကိုမိုက် သွေးကတော့ ရှယ်ဘဲဗျ…
တွေ့ တဲ့အခါ ပြုစုပါ့မယ်ဗျား…။
အဒေါ်ကြီးပြောတဲ့… ” စာ ” ကတော့…
တရုတ်လိုစာချရင် ကျောက်စ်လည်း ငတ်မှာပဲ…
အိုရင်စားဖို့… အိုစာရယ်၊ အစိုးရနှိပ်စက်ရင် ပေးဖို့… မင်းစာရယ် ကတော့…
ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြောင့်ကြစိုက်ပြီး လုံလပြုပါမှ စိတ်အေးရမယ် ဆြာခေါင်…
စာက ရှင်းရှင်းလေး ရေးထားတာပါ
“ လာဒ်ပေး….ရန်မလို” တဲ့…။
အဲဒီ မင်း က မင်းကျင့်တရားနဲ့ ညီတဲ့မင်းဆိုရင်တော့ မင်းစာ ပေးပျော်ပါတယ်လေ။
ခေါင့် အိုစာ မင်းစာ အတွက်တော့ မပူပါနဲ့ ခေါင်။
သူ့ စာ အဓိပ္ပါယ်ကြီးကလဲ….
ကျွန်တော်လည်းအဲဒိ ဘုရားဟော ဒဿနလေး ကြိုက်လွန်းလို့ 
ဖောင် နဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း
တရားကိုတောင် မစွဲလမ်းစေတဲ့ လွတ်လပ်ကြည်လင်မှု . . . .
ရဟန်းနဲ့ မတူသော ရဟန်းတွေ အကြောင်းတော့
ဒီ…အတွေးအခေါ်က အရာရာကို ပိုကောင်းစေတယ်…
ကျမတို့တောမှာလည်းအဲ့လိုဓလေ့တွေရှိတယ်။ငယ်ငယ်ကနတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာကြီးပျင်းခဲ့တာ။ တစ်ခုကောင်းတာက မေမေတို့က သိပ်အစွဲအလမ်းမကြီးကြတာ။ ဖိုးဖိုးနဲ့ကျမတို့မောင်နှမတွေ ဖွားဖွား အုတ်ဂူသွားကန်တော့ တယ် ပြီးရင် အဲ့ဒီ အသားပြုတ်တွေ သင်ချိုင်းကနေအိမ်ပြန်သယ်တာပဲ။ဟီးးး ငတ်တော့အရောင်ပဲပြပြီးချက်စားရတာ။ သင်ချိုင်းရောက်ရင်တောတိုးပြီး ပန်းတွေခူးတာပဲ။အိမ်သည်ရင် သရဲပါလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့။ကျမတို့မျောက်ရှူံးတွေကိုကြောက်တယ်နဲ့တူတယ်။ဟီးးး
စာမရေးတတ် မဖတ်တတ်တဲ့သူတွေမြင်ရကြားရရင် ၀မ်းနည်းတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးတောင် မသင်ရတဲ့သူတွေမြင်ဘူးခဲ့တယ်။ မေမေ ကျမတို့ကို ပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အဲ့ပုံပြင်ထဲက ကလေး လေးဟာ စာမတတ်တော့ သူ့ကိုသတ်ခိုင်းတဲ့စာကို သူကိုယ်တိုင် သူ့ကိုသတ်မဲ့လူလက်ထဲသွားဖို့ခရီးထွက်ရတဲ့အကြောင်း။
မလဲ့က ငယ်ကတည်းက စာဖတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ နောင်ရေး မပူရတော့ဘူးပေါ့…ခုခွိ..ခုခွိ
အိုစာမင်းစာ ဆိုတာ အခုမှပဲသေချာသိတော့တယ်ဆြာခေါင်ရယ်။ ရီလိုက်ရတာ။ စိတ်လဲမကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့။
သူတို့ ဘ၀လေးတွေက ရယ်ချင်ပေမယ့် စိတ်မကောင်းဖြစ်၇တာက များတယ်..။
ရိုးသားလွန်းအားကြီးတာကလဲ အပြစ်တခုပေါ့ ဆြာခေါင်ရယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘဝတုန်းကတော ညောင်ပင်ကြီးအောက်သွားပြီ သစ္ဆေ နဲ့ တောင်ဆော့ကြသေးတယါဗျ
ညောင်ပင်သစ္ဆေ ဝေလေလေ နင်ဘယ်ကိုင်းမှာနေ
ကျနော်တို့ ငယ်တုန်းကလဲ ဆော့ခဲ့ရတယ်…
ခုခေတ်ကြီးမှာတော့ ကလေးတွေ မဆော့ကြတော့ဘူးထင်တယ်…။
ပြောရမယ်ဆို ဒီကစားနည်းလေးက မြန်မာရိုးရာ ဓလေ့ဆန်တယ်နော..။
အင်း.. အိုစာမင်းစာကို.. ဖတ်တဲ့စာမဟုတ်ပဲ.. ငွေဘဏ္ဍာမှာသုံးတာထင်နေတာ..။ မှတ်ကရောပဲ…
ခုရက်ထဲ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ယောင်္ကျားကြီး ၃-၄ ယောက်လောက် ပယောဂ၀င်ပူးနေတာကို ကုပေးသလို ရိုက်နှက်ပြောဆိုနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။
ခုခေတ်မှာလည်း အဲလို ခေတ်နောက်ပြန်အယူအဆတွေ ရှိနေသေးတာပဲလား မသိဘူး။
အဲဒီမိန်းးကလေး ဆြာခေါင်နဲ့မတွေ့တာ နာသွားတယ်။
ဒါ့ထက် ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးမိတာလေးက………
အိုစာ မင်းစာ ဆိုတာ နောင်ရေးအတွက် အသက်ကြီးရင် သုံးဖို့ စားဖို့အတွက် သုံးတာလို့ထင်တယ်။
အရေးဟယ်အကြောင်းရယ်ဆိုရင် စာရေးတတ်အောင် သင်ထားရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သေစာ ရှင်စာ လို့ ပြောမယ်ထင်တယ်။
ကိုရင်ခေါင်လုပ်လိုက်တာ.. ကျုပ်မှာ.. စာအုပ်တွေတော်တော်လှန်လိုက်ရတယ်..
အိုစာမင်းစာဆိုတာ.. အိုတဲ့အခါသုံးစွဲဖို့.. ငွေချန်ရမယ်..။
မင်းစာဆိုတာ.. ဘုရင်မင်းတရားကိုအခွန်တော်ဆက်ဖို့.. ငွေဘဏ္ဍာချန်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ…
ယူအက်စ်မှာတော့.. အိုလာရင်.. မင်း(အစိုးရ) က.. ပြန်ပေးရတယ်..။
အစိုးရအလုပ်နှစ်၃၀-၄၀လောက်လုပ်ဖူးခဲ့ရင်.. သူ့ပင်စင်က… ပုံမှန်လစာအတိုင်းလောက်ကို.. အပြည့်ပြန်ရတဲ့အပြင်..အစိုးရက.. ကျမ်းမာရေးအကုန်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့…
အဲလို ပို့ စ်တွေကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ပြီး ပြုပြင်လမ်းကြောင့်တည့်ပေးလို့ကျနော်က သူကြီးကို လေးစားခင်မင်တာပါ့..။
မမနဲ့သူကြီးပြောတာ ကျနော်လက်ခံပါတယ်..။
တခါတခါ ကျနော်လည်း တွေးတာလွဲတယ်..
ဒါပေမယ့် ကျနော်က ပြုပြင်ရလွယ်တဲ့သူပါ..။
သေစာ ရှင်စာကို ပိုလက်ခံပါတယ်..။
မမပြောတဲ့ ဗီဒီယိုဖဖိုင်ကို ကျနော်လဲ ကြည့်ရပါတယ်..
တော်တော်ကို လွန်ပါတယ်.. ဆရာဆိုသူတွေ။
ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ တော့ ပြောလို့ မရဘူး မမ..။
တစ်ချို့ နေရာတွေမှာက အဖြစ်အပျက်တွေက ငြင်းဘို့ ခက်တယ်..။ ပြသနာက မေတ္တာတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ရောဂါကုတယ်ဆိုပြိး ဘာလို့ ဒီလိုနှိပ်စက်တာလဲ…ဆိုတဲ့အမြင်ပါ..။
ပညာသည်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ရတုန်းက ကျနော့်အတွက်တော့ ကုသိုလ်တောင်ရခဲ့ပါတယ်..။
ကျနော်က ဘာဆေး ဘာတုတ်တိုတစ်ချောင်းမှ မသုံးပါဘူး..လက်နဲ့ တောင်မရွယ်ပါဘူး…။
မေတ္တာနဲ့ ဘဲ ပြောပြတာပါ..။
နောက် မမပြောတဲ့ ကျနော့်ပို့ စ် ခေါင်းစဉ်က သေစာရှင်စာကပိုသင့်တော်ပါတယ်..။
ခုလို ထောက်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမရေ..။
ပယောဂ ကုတာ ဟာ ဆေးကုတာ တစ်မျိုးပဲလို့ ခံယူမိတယ်..
အယူအစွဲအလွဲအမှားတွေကို ပြင်လို့မရပဲ လိုက်ပြင်နေမယ့်အစား
သူ့အကွက်အတိုင်းလိုက်နင်းပြီး သူ့ယုံကြည်မှု့နဲ့ သူ့ပြန်ကု တာမျိုးပေါ့….
ဒါဟာ မြန်မာဆေးနဲ့ မြန်မာ့ဆေးကုထုံးတွေဟာ အရင်ခေတ် မြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ် အစွမ်းထက်ထိရောက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်မျိုးပါပဲ..။
ကျုပ်ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အဆောင်မှာ ဆေးဆရာ နှစ်ယောက်ရှိတယ်
အနာဂျက်ဆင်တို့ အေပီစီ တို့ ဘာမီတွန် တို့ စီအိုအမ် တို့ ဂျဲလ်မက်တို့ ကို ကော်ဖီပုံးထဲထည့်ပြီး ကုတာ…။
နောက်ထပ် ကျုပ်ထက် ဆယ်ဆမက စွမ်းတဲ့ ဆေးဆရာတစ်ယောက်လဲရှိသေးတယ်…
သူကတော့ သူ့ရဲ့ လှို့ဝှက်ဆေးမှုန့်လေးတွေကို ပုလင်းအညိုရောင်လေးထဲထည့်ပြီး ရောဂါအနုအရင့်အလိုက် ရွေးစေ့လောက် ရွေးတခြမ်းလောက် လေးပဲပေးပြီးကုတာ…
အရမ်း အရမ်း စွမ်းတယ် နော…
ကျောင်းပြီးခါနီးတော့ သူ့ရဲ့ လှို့ဝှက်ဆေးအမည်ကို နှစ်ကိုယ်ကြားပြောခဲ့တယ်
ကိုးပါး ဆေး တဲ့….။
တစ်ထုပ် သုံးမတ်ပဲ ပေးရတယ် တဲ့……………။
“ပယောဂ ကုတာ ဟာ ဆေးကုတာ တစ်မျိုးပဲလို့ ခံယူမိတယ်..
သူ့အကွက်အတိုင်းလိုက်နင်းပြီး သူ့ယုံကြည်မှု့နဲ့ သူ့ပြန်ကု တာမျိုးပေါ့….”
ကျနော်လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ ကုသပုံက အခု ဦးပါပြောတဲ့ အတိုင်းကွက်တိပါဘဲ..
စိတ်ကို…စိတ်နဲ့ ဘဲ ကုတာပါ။။
ဂုဏ်တော် ၉ပါးပါ…။ နောက် ဆိုက်ကို သုံးတယ်..။
ိဆိုက်ကို ဆိုတာကို လက်ခံတယ် အူးခေါင်…
(၆) တန်းနှစ်က ဘာလို့လည်းမသိဘူး. (တကယ်တော့ ညံ့လို့ပေါ့) ကျောင်းမှာ အဆင့် (၂) က မဆင်းတဲ့ လုံမက (ကြွားတာ မဟုတ်ဘူးနော်) ပထမဆုံး လပတ်မှာတင် အဆင့် (၆) တဲ့… စိတ်ဓာတ်တွေများ ဟိုးးအောက်ဆုံးပဲ… အဲ့ဒါ အမေကလည်း လန့်ဖျန့်ပြီး ဟိုလူ့မေး ဒီလူ့မေးပေါ့…
အဲ့ဒါ အသိတစ်ယောက်က စာမေးပွဲဖြေခါနီး ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ခုံခင်း၊ လင်ဗန်းတင်၊ လင်ဗန်းထဲဆန်ထည့်၊ ဆန်ပုံပေါ် လုံမဓာတ်ပုံကိုတင်၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်း၊ ရေမန်းတိုက်၊ စိန္တာမဏိဘုရားစာရွတ်ခိုင်းပြီး သွားဖြေတာ… ဟဲ.. အဲ့ဒီအပတ် အဆင့် (၂) ပြန်ရတယ်.. ကလေးဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်နေတာလေ… နောက်အပတ် အဲ့လိုမလုပ်တော့ အဆင့် (၄) ပြန်ဖြစ်သွားတယ်..မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ (၆)တန်း နှစ်ဆုံးတော့ အဆင့်မဝင်ခဲ့ဘူး..
အူးခေါင်စာကိုဖတ်ပြီး မဆီမဆိုင် သွားသတိရတယ်…
သတင်းစာတွေထဲမှာလေ… ဘယ်သူရေ..ဘယ်ဝါရေ… ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားပြီနော်…အောက်မေ့နေဆဲပါ… ပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကို အမျှဝေပါတယ်… ရောက်ရာအရပ်က သာဓုခေါ်ပါ တဲ့…
အော်…သရဲဖြစ်တာတောင် စာဖတ်တတ်ရုံတင်မကဘူး..သတင်းစာပါ ဝယ်ရမယ့်အဖြစ်…
မွန်မွန်က ဦးခေါင်ထက်ကို ပိုတွေးပြီး မြင်တတ်သေးတယ်..
။။။လုံလုံ ပြောတာ တွေးပြီး ရယ်ချင်တယ်..
သတင်းစာ ၀ယ်ရမယ် ဆိုတာလေ..။း)